Jointech na "Intermodal Aisa 2018"
site ha na 18-07-31
The Intermodal Aisa 2018 àmà a magburu oghere Shanghai Expo on April 20. Nke a exposition ga-elekwasị anya na nnukwu ohere n'okpuru ndabere nke "One-echebe Mmadụ na Road", clustering anụ ụlọ na zuru ụwa ọnụ ọhụrụ teknụzụ na ngwaahịa site na ụfọdụ mkpa ọrụ, dị ka nwere ...
Akpa Tracker otú jikwaa lọjistik ụgbọ ala?
Akpa, lọjistik ọrụ chere ihu na nsogbu? 1, otú iji hụ na nchekwa nke ibu, ihe onwunwe, dị ka midway ebutu pụọ? 2, otú iji gbochie ọkwọ ụgbọala ihe ize ndụ na-anya ụgbọ, ohi nke manu, oji onwe nke ụgbọ ala, sere onwe ndụ? 3. Olee otú ịghọta ọnọdụ nke t ...